Global Voices teny Malagasy » Tambajotram-blaogy vaovao : Izao tontolo izao araka ny fiheveran’i neny · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Aogositra 2018 5:00 GMT 1	 · Mpanoratra Solana Larsen Nandika (fr) i Fabienne Flessel, imanoela fifaliana
Sokajy: Amerika Avaratra, Amerika Latina, Bolivia, Etazonia, Filipina, India, Hevitra, Mediam-bahoaka, Tanora, Teknolojia, Vehivavy sy Miralenta
Inona avy , araka ny reny mpiblaogy manerana ny tany, ireo zavatra dimy tsara indrindra mikasika ny fiterahana ? Niaraka niasa tamin'ilay kanadiàna Catherine Connors, antsoina koa hoe Her Bad Mother  [amin'ny teny anglisy] mba hanontaniana ireo reny mpitoraka blaogy mikasika iolohahevitra io ary hankahery azy ireo hamorona tambajotran-tserasera eo anivon'izy ireo. Hatreto aloha, blaogera 85 avy amin'ny firenena 26 no namaly anay, fa mbola mitady betsaka kokoa noho izany izahay.
Natombok'i Catherine ilay tetikasa tamin'ny alalan'ity lahatsoratra voalohany ity, izay manolotra ny hevitra niandohana  [amin'ny teny anglisy] :
Volana vitsy lasa izay, nanontany ahy ny namako David  [amin'ny teny anglisy] raha toa ka mihevitra aho fa afaka atao ny mandehandeha manerana izao tontolo izao amin'ny alalan'ny blaogy.
Somary ohatr'ilay hoe ”Fitetezana ny Tany anatin'ny 80 andro”, hoy izy, ”fa amin'ny aterineto, ho fitetezana ny tany anatin'ny kitika totozy 80 izany. Kitika 80 avy amin'ny reny mpitoraka blaogy ! ”
”Tsy haiko, hoy aho taminy, fa toa hevitra tsara izany amiko ary tsara andramana.”
”Tsy ratsy. Fa raha nanana ny fahafahana hitsidika an-tambajotra ireo reny ireo ianao, inona no tianao resahina aminy?”
Ao anatin'ireo fandraisana anjara tena mampihetsi-po indrindra, misy i Hip Hop Grandma  [amin'ny teny anglisy], avy any India, izay mamaritra ny fomba nanovan'ny fitiavany ny zanany ny fomba fijeriny mikasika ny toerany tao anatin'ny fianakaviana. Mamaritra ny hery lehibe izay hitany fa tonga tao aminy nony lasa reny izy ilay boliviana blaogera Capsula Del Tiempo  (amin'ny teny anglisy sy espaniola), toy ny ”sofina mahay mihaino amin'ny alina” sy ny ”fahafahana maminany ny ho avy”; ary farany, manoratra ”kabary fanolorana diplaoma” ho an'ny tenany ihany ilay reny blaogera avy any Filipina, i Touched by an Angel  [amin'ny teny anglisy], mba hiarahabana ny tenany noho ny niterarahany zaza telo mahafinaritra.
Ireo mpanoratra avy ao amin'ny Global Voices no nahafahanay nahita ireo reny blaogera manerana ny tany ary nanao ny hetsika fisantarana hifandray amin'izy ireo sy hitahiry ao amin'ny blaoginy, ary noraisin'i David Wescott, ilay amerikana naman'i Catherine ny andraikitra hifandray amin'izy ireny sy hirakitra ny rohy mankany amin'ireo mpandray anjara rehetra ho ao amin'ny bilaoginy It's Not a Lecture [amin'ny teny anglisy]. Ao amin’ny faharoa  tamin'ireo fanavaozana efatra nataony (hatreto), nanoratra izy [amin'ny teny anglisy]:
Mihamaka endrika mihitsy ny zavatra rehetra. Hatramin'ny nanombohan'i Catherine ilay tetikasa manerana izao tontolo izao momba ireo reny blaogera, efa nahazo lahatsoratra 40 avy amina reny mipetraka na avy amina firenena 14 samihafa aho. Efa ”voamarika” (nampahafantarina) avokoa ireo reny mipetraka any amin'ny firenena folo latsaka kely ary nandefa antso ho an'ireo koreanina blaogera mba handraisan'izy ireo anjara ny blaogina vondrona reny koreana-amerikana, izay mitondra ny anarana hoe Kimchi Mamas.
Voamarika sy avahana isaky ny firenena ao amin'ny delicio.us ireo lahatsoratra, miaraka amin'ny tenifototra 80clicks  [amin'ny teny anglisy]. Ho sarotra kokoa ny hirakitra izany rehetra izany, noho izany, raha toa ianao ka mandray anjara sy maniry ny ho ampidirina ao anatin'ilay lisitra, mba mamelà fanehoankevitra eto na ao amin'ny lahatsoratr'i Catherina, mba hahazoanay antoka fa tena voarakitra marina ianao.
Andro vitsivitsy taorian'izay, nanoratra i David tao anatin'ny fanavaozana fahefatra nataony [amin'ny teny anglisy]:
Mitohy ny fahavitrihan'ilay tetikasa manerantany ho an'ireo reny blaogera, natomboka voalohany tao amin'ny ”Her Bad Mother”. Efa nahita reny mihoatra ny 85 aho tao anatinà firenena 26 izay mizara ny zavatra tiany ao anatin'ny maha-reny azy. Ireto misy fanampiny hitako hatreto, ary antitranteriko ny hoe ”hitako hatreto” satria mety mbola misy tsy hitako…
… Ireo [amerikana] voaroaka an-tanindrazany no tena nandray ilay tetikasa, noho izany manohy ny mikaroka ireo fenitra hafa mifanaraka amin'ireo firenena maro samihafa aho. Marina tokoa mantsy fa amerikana avokoa ireo vehivavy blaogera any Italia, Bahrain ary Maraoka ary farafahakeliny avy any Kanada ny iray amin'ireo blaogera koreana, kanefa ry zareo samy manana zavatra manery ahy hanoratra azy ireny ho toy ny avy any amin'ireo firenena ireo.
Ho an'ireo mpamaky ny Global Voices manerana izao tontolo izao :
Ampio izahay hahita blaogera bebe kokoa manerana ny tany ho an'ity tetikasa ity, amin'ny fanoratana lahatsoratra na amin'ny teny inona na amin'ny teny inona, mikasika ireo zavatra dimy tena tianao amin'ny maha-reny (na ny maha-ray ihany koa aza moa!) Ampahafantaro ny namanareo, ampio ny tenifototra #globalmoms  [amin'ny teny anglisy] ny lahatsoratrareo sy ny bitsikareo (hafatra ao amin'ny sehatra fitorahana blaogy bitika Twitter) ary ampio izahay hanao ny ”fitetezana ny tany anatin'ny kitika 80”.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/06/124205/
 ny faharoa: http://itsnotalecture.blogspot.com/2009/04/world-according-to-mom-update-2.html
 fanavaozana fahefatra nataony : http://itsnotalecture.blogspot.com/2009/04/world-according-to-mom-update-4_13.html